Soloko uDon Juan Tenorio, iklasikhi ebalulekileyo yale mihla | Uncwadi lwangoku
Umfanekiso we UDon Juan Tenorio (Ngo-1922) nguRicardo de Baños.
Omnye unyaka Andiyikhuphi ikota kumathanga angaphandle. Ayizizo zonke izinto ezenziwa ngamalulwane, ii-cobwebs kunye nezindlu ezingena abantu ezihlasela iivenkile kunye nemivalo. Kananjalo nakwimibutho yesikolo yempahla yobugqwirha kunye neziporho (abanye ke baphupha ...). Andihambi namaxesha kwaye andilunganga kwezopolitiko kuba ndihleli naye, noDon Juan Tenorio. Ngentsomi ngoku egculelweyo (okanye eguqulwe ngokutsha) yintsomi engoyiki ehlazo nekhohlakeleyo, kodwa ikwayeyona ininzi iseluthandweni kwaye ihlawulelwe.
Don UJose Zorrilla ubhale ibali lakhe kwi 1844, okukhuthazayo Inkohliso yaseSeville ukusuka ngo-1630, kubangwa ukuba UTirso de Molina. Kwaye yile nto kufuneka siyifunde kwaye ngakumbi sibone imelwe kule mihla izayo. Ndiyazi ukuba umlo wam ngumlo olahlekileyo, kodwa Ndizakuzama ukulwa unyaka nonyaka ukuze ndiqhubeke nokuwenza ukuba ubalasele. Kudala abantwana besikolo kwakufuneka bayifunde kwaye bayicengceleze. Ngoku… kungoku. Ewe, ndibuyela yonke ukuphela kuka-Okthobha kwindlu yabahambi iLaurel ukumfumana ebhala ileta yakhe. Zezi ezinye zeendinyana zakhe ezingalibalekiyo.
1 UDON JUAN
2 Ndikunye noDON LUIS
3 Ndikunye noDON DIEGO
4 Kunye ne-DOÑA INÉS
Hayi indlela abakhalayo abalahliwe ngayo!
Kodwa umbane ombi undophule
ewe ekugqibeni ileta
abayihlawuli kakhulu imikhwazo yabo!
Nantsi idon Juan Tenorio
kwaye akukho mntu wakhe.
Ukusuka kwinkosazana enekratshi
kulowo uloba kwisikhephe esiqhelekileyo,
akukho mfazi ndingabhalisanga kuye,
kwaye nayiphi na inkampani igubungela
ukuba ngegolide okanye ngexabiso.
Khangela kuye abavukeli;
Makhe sibone ukuba ngaba ukhona umntu omdlulayo
kumdlalo, ekulweni okanye kuthando.
Naphi na apho ndiya khona
Isizathu sokuba ndileqe ngaphezulu
Sele ndibathengisile abantu basetyhini.
Ndihle ndaya ezindlini,
nayo yonke indawo ebendishiya kuyo
inkumbulo ekrakra ngam.
Ndakhala ezulwini, akandiphendula.
Kodwa ukuba iingcango zalo zindivale,
Amanyathelo am emhlabeni
phendula izulu, hayi mna.
Suka kude, ilitye lokulinganisa!
Masihambe, yeka eso sandla
ukuba kusekho iinkozo zokugqibela
iwotshi yobomi bam.
Yiyeke, ukuba yinyani
ngaphezu kwenqaku lokuzisola
nika umphefumlo usindiso
Mna, Thixo oyingcwele, ndiyakholelwa kuwe;
ukuba andiyiva into embi,
inceba yakho ayinasiphelo ...
Nkosi yiba nenceba kum!
Ndikunye noDON LUIS
NguThixo uyindoda engaqhelekanga!
Usebenzisa iintsuku ezingaphi
kuwo onke amabhinqa omthandayo?
Suka kwiintsuku zonyaka
phakathi kwakho ofumana apho.
Omnye ukubenza bathandane,
ezimbini endaweni yazo
kunye neyure yokulibala.
Ndikunye noDON DIEGO
Uyandibulala ... Más ndikuxolele
kaThixo kumgwebo ongcwele.
Ixesha elide undibekile.
(Nangona ndiza kuhlala ndikhetha uguqulelo lukaTirso de Molina apho uTrickster wathi "Undithemba nini?").
Kunye ne-DOÑA INÉS
Ah! Akuyinyani, ingelosi yothando,
ukuba kunxweme oluzimeleyo
kwaye uphefumla ngcono?
Le aura ebhadulayo, igcwalisa
Unxweme olumnandi luyaphuma:
la manzi acocekileyo nahlaziyayo
oko kuhamba ngaphandle koloyiko
ulinde ukucula usuku,
Asiyinyani, hobe lam,
uphefumla ntoni love
Andazi ... Oko ndambona,
soloko ephambi kwam.
oko kusoloko kujika mna kuye
kwaye apha nakwisincoko
ukuba ukucinga kuyonwabisa […].
Thula, ngenxa kaThixo, oh don Juan!
ukuba andizokwazi ukumelana
ixesha elide ndingafanga
so zange ndaziva ndinomdla.
Ah! Yithi cwaka ngovelwano,
ukumamela kuwe kubonakala kum
ukuba ingqondo yam iyageza
Intliziyo yam iyatsha.
Hayi! Undiphe ndasela
Isihluzo sesihogo, ngaphandle kwamathandabuzo,
oko kukunceda unikezele
isidima sabafazi […].
Umphefumlo wam! Elo lizwi
Ukutshintsha kwam indlela,
ide ivule i-Eden.
Akunjalo, Dona Ines, uSathana
obeka olu thando kum;
NguThixo ofuna wena
ndiphumelele ngenxa yaKhe mhlawumbi.
Hayi, uthando oluxabisekileyo namhlanje
entliziyweni yam yenyama
ayilo thando lwasemhlabeni
njengaleyo bendiziva ngayo kude kube ngoku;
ayisiyiyo la ntlantsi idlulayo
ukuba nawuphi na umphunga uyacima;
ingaba ubona kangakanani, kukhulu, kunqabile.
Lahla ixhala lakho
intle doña Inés,
kuba ndiziva ndisezinyaweni zakho
usenako ukuba nesidima.
Ewe, ndiya kuya kuzidla
phambi koMlawuli olungileyo,
okanye uza kundinika uthando lwakho,
okanye kuya kufuneka andibulale.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ithiyetha » Soloko uDon Juan Tenorio, iklasikhi ebalulekileyo yale mihla
UMaria Ines sitsho
Bekumnandi ukuyifunda… enkosi!
Phendula uMaría Inés